Noqo Shiinaha oo si ballaaran loo iibiyey matoor Ogsajiin ah oo raagaya oo tayo sare leh oo iib ah warshad iyo soo saarayaasha |HRF
Maxaad u dooratay HRF
Isku-xidhka Ogsajiinta Caafimaadka
Mashiinka samaynta marada spunbond ee aan timaha lahayn
Xirmooyinka aflaanta waji-xidhka, sanduuqa laalaabida, baakaynta iyo xidhitaanka khadka wax soo saarka
Mashiinka jeermiska UV ee waji-xidhka
Mashiinka samaynta dharka dhalaalaysa
Mashiinka samaynta dharka Spunbond
Spunlace mishiinka aan-xidhka lahayn
khadka wax soo saarka SMS
hal S mashiin samaynta dhar aan tol lahayn
SS mashiinka samaynta marada aan timaha lahayn
Khadka wax soo saarka xafaayadda ilmaha
Mashiinka samaynta galoofyada la tuuri karo
Mashiinka daboolka kabaha
Koronto dhaliyaha ogsijiinta oo tayo sare leh oo si weyn loo iibiyey
Cadaadiska Hawada Cadaadiska ah: 0.7-1.3MPa(7Bar-13Bar)
Awoodda Ogsajiinta: 100Nm3/h
Nadiifadda Ogsajiinta: 93%±2%
Cadaadiska Outlet: 0.5Mpa ama shuruud kasta
Dhibicda dhibicda: ≤-40℃
Awood koronto: 380V/3P/50HZ ama la habeeyay
PSA (Cadaadiska Swing Adsorption) Farsamada kacaanka Kala soocida Hawada Non Cryogenic iyo Farsamada Jiilka Ogsajiinta waxay isticmaashaa darajada gaarka ah ee ZMS (Zeolite Molecular Sieve).
Hawada isku xidhan waxa la sii maraa module Twin Tower PSA oo ku xidhan is bedel toos ahKa dib marka la soo maro hawo qaboojiye ah ayaa qallajisa.Hawo qallalan oo ciriiri ah ayaa hadda la xiriiri doonta sariirta shaandhada molecular Zeolite (ZMS).Zeolite Molecular Sieves waa darajo gaar ah oo adsorbent ah kaas oo leh hantida la doorbidayo xayeysiinta molecules nitrogen.Waqtiga hal munaarad ayaa ku hoos jira wareegga wax soo saarka nitrogen, halka munaaradda kale ay mareyso dib u cusbooneysiin taas oo lagu gaaro niyad-jabka munaaradda ilaa cadaadiska atmospheric.Gaaska ogsijiinta ee baxaysa waxa loo diraa weel qalliin ah halkaas oo cadaadiska ugu yar lagu hayn doono iyadoo la kaashanayo Mabda'aha cadaadiska dhabarka.
Hadda hel xigashooyin !!!
1. Compressor hawo sumad ku taxan;
2. Jarmalka Siemens PLC xakamaynta caqliga;
3. Qaybaha korantada ee Schneider, wakhtiga jawaabta degdega ah iyo nolosha dheer;
4.7 inch touch screen aadanaha-mashiinka interface, fududahay in la shaqeeyo;
5. Solenoid valve wuxuu qaataa astaanta Taiwan Airtac, qalabka hawlgalka muddada dheer ee xasilloon;
6. Bilaw toos ah iyo joogsi toos ah, faaruqin otomaatig ah, si toos ah u bilow iyo joogsi ka dib bixinta degdega ah ee ogsijiinta u qalma;
7. Pneumatic valve iyo tuubada isku xirka pneumatic waxay ka samaysan yihiin bir aan lahayn, iska caabin qabow oo hooseeya;
8. Iyada oo shaandhada markabka cadaadiska kaarboonka ee firfircoon, saameyn ka saarista saliidda oo wanaagsan;
9. Qalab waaweyn oo isticmaalaya qalabka cidhiidhiga ah ee dhululubada, si looga hortago budada shaandhada molecular, si loo hagaajiyo nolosha adeegga;
10. Kordhi dab-qabtaha, khataraha dabka waa la dammaanad qaaday;
11. Qalabka waxaa lagu calaamadeeyay dhuumaha iyo albaabka akhriska si waafaqsan heerka caalamiga ah, kaas oo ku habboon maaraynta iyo dayactirka.
Lagu turjumay www.DeepL.com/Translator (nooca bilaashka ah)
Shirkaddu waxay ku siin kartaa PSA VPS dhirta nitrogen, geedka oksijiinta PSA, PSA sare
PSA cadaadiska doorsoomayaasha oksijiinta,
hydrogen, qalabka hydrogen-nitrogen, qalabka sifaynta gaaska, qalabka soo kabashada gaaska, nadiifinta hawada
Waxaan ku siin karnaa noocyo kala duwan oo xalal gaas ah sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
Waxaan sidoo kale ku siin karnaa noocyo kala duwan oo ah xalalka sahayda gaaska iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, waxaanan siinaa macaamiisha nitrogen, oxygen iyo qalabka wax soo saarka hydrogen iyo qalabka la xiriira.
Waxaan siin karnaa macaamiisha dayactirka nitrogen, oxygen, hydrogen iyo qalabka la xiriira, tababarka farsamada iyo la-talinta farsamada, iwm. Shirkadu waxay soo saartaa
Qalabka waxaa si weyn loogu isticmaalaa kuwa aan birta ahayn, birta birta ah, daaweynta kulaylka, warshadaha kiimikada, batroolka
warshadaha, warshadaha balaastikada, warshadaha caaga ah, warshadaha elektarooniga ah, biirka iyo cabitaanka, ilaalinta cuntada
warshad cusub, biraha, warshadaha dhalooyinka, warshadaha dhuxusha, aerospace taageero technology iyo warshadaha kale
Qalabku waa mid deggan oo la isku halayn karo.
Main: Koronto dhaliyaha ogsijiinta Highland, Highland Dispersing Ogsajiinta Mashiinka, PSA variable cadaadiska adsorption warshad cyanide, PSA cadaadis adsorption warshad oxygen
PSA VPS warshad oksijiin, PSA VPS warshad hydrogen nadiif ah oo saraysa, warshad burbursan oo adag
aaladda radon, aaladda u dhiganta hydrogen-nitrogen, aaladda sifaynta gaasta, qalabka soo kabashada gaaska, hawada
qalabka gaaska sida mashruuca sifaynta gaaska
Hore: Qiimaha Warshada Soosaariyaha ogsijiinta warshadaha ee Nadiifinta Sare
Xiga: Cadaadis sare oo tayo sare leh oo aan kala go 'lahayn
1.Does hal mashiin ayaa soo saari kara hal cabbir oo keliya?
Dhab ahaantii maaha, waxay kuxirantahay mashiinka.
2. Ma haysataa taageerada iibka kadib?
Haa, waan ku faraxsanahay inaan bixino talo sidoo kale waxaan haysanaa farsamoyaqaano xirfad leh si ay u ilaaliyaan mashiinka haddii loo baahdo.
3. Sida loo booqdo shirkaddaada?
Waxaan kaa soo qaadi karnaa garoonka diyaaradaha ee Shanghai ama Hangzhou.Ama xarunta tareenka Shaoxing North.4. Maxaad samayn kartaa haddii mishiinku jabo?
Muddada dammaanadda mashiinkayaga waa 12 bilood.Haddii qaybaha jaban aysan hagaajin karin, waxaan u diri karnaa qaybaha cusub si aan u bedelno qaybaha jajaban, laakiin waxaad u baahan tahay inaad adigu iska bixiso kharashka degdega ah.Haddii muddada dammaanadda ka dib, waxaan ku dhex mari karnaa gorgortanka xallinta dhibaatooyinka, waxaanan siinaa taageerada farsamada nolosha qalabka oo dhan.
5. Ma mas'uul ka noqon kartaa gaadiidka?
Haa, fadlan noo sheeg dekedda ama ciwaanka aad ku socoto.Waxaan khibrad qani ah u leenahay gaadiidka.
6. Waxaad tahay shirkad ganacsi ama warshad?
Waxaan nahay Soo-saare.
7. Maxay tahay sababta qiimahaagu uga sarreeyo kuwa kale?
Anaga oo ku adkaysanayna in warshad kastaaba ay marka horeba tayadeeda dhigto.Waxaan ku bixinaa waqti iyo lacag horumarinta sida mashiinada loo sameeyo si toos ah, sax ah, iyo tayo sare leh.Waxaan hubin karnaa in mashiinkayagu uu isticmaali karo wax ka badan 20 sano iyada oo aan wax dhibaato ah dhicin.
8. Ma leedahay injineero dibadda ah?
Haa, kaliya ma bixino injineerada dibada laakiin sidoo kale waxaan bixinaa tababar farsamo.
9. Ma bixisaa hab gaar ah?
Hubaal, waxaan u qaabayn karnaa qalabka si waafaqsan xogta qaybta qaab-dhismeedka ee aad bixiso.Waxaan nahay naqshadeeye mashiinka samaynta biraha birta ah ee xirfadleyda ah iyo soo saaraha.
Kiimikada dhalisa ogsijiinta xirfadeed ee Peru ...
Astaanta sare ee tayada la isku halayn karo ee psa koronto dhalisa
99% nadiifinta darajada caafimaadka
Qiimaha Warshada Nadiifinta Sarreysa ee Ogsajiinta Warshadaha...
2-627, Xiangjiang North Road, Degmada Cusub, Wuxi, Shiinaha